PGD Real Estate Co.,Ltd. (ပြည်ကြီးတံခွန် အိမ်ခြံမြေ) - Myanmar Real Estate, Myanmar Real Estate Website, Myanmar Property Portal, Property for sale/rent| ShweProperty
PGD Real Estate Co.,Ltd. (ပြည်ကြီးတံခွန် အိမ်ခြံမြေ)
09-250087887,09-250086007,09250086345,09250086787,01523232, 09250087887, 09250086345, 0925 Website
No.127, 6th Floor, Bagayar Road, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar
About PGD Real Estate Co.,Ltd. (ပြည်ကြီးတံခွန် အိမ်ခြံမြေ)
PGD Real Estate Co.,Ltd. (ပြည်ကြီးတံခွန် အိမ်ခြံမြေ) ၏ နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေများ
ငှားရန် - ၀ါးတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။
Advertised by PGD Real…
Listed on 15 October 2016
လမ်းမတော် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,300 USD
ငှားရန် - Condo for rent in Yankin Township, Set Hmue (1) Road, Pyinnya Waddy Condo,
Condo for rent in Yankin Township, Set Hmue (1) Road, Pyinnya Waddy Condo,
ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	20 သိန်း
ငှားရန် - Office for rent! (30'x80')(2400Sqft)
Office for rent! (30'x80')(2400Sqft)
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,700 USD
Asking Price : 1,700 USD
ငှားရန် - Condo for rent in Padeban Township, Shwe Bon Thar Street, Shwe Ou Daung Condo,
Condo for rent in Padeban Township, Shwe Bon Thar Street, Shwe Ou Daung Condo,
ပန်းပဲတန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,700 USD
ပန်းပဲတန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ငှားရန် - House for rent in Golden Valley Avenue, 3RC
House for rent in Golden Valley Avenue, 3RC
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	7,500 USD
Asking Price : 7,500 USD
ငှားရန် - Condo for rent in Sanchaung Township, Mingalar Street,
Condo for rent in Sanchaung Township, Mingalar Street,
ငှားရန် - Nice apartment for rent in Sanchaung Township, Phyar Pone Street
Nice apartment for rent in Sanchaung Township, Phyar Pone Street
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	6 သိန်း
ငှားရန် - Apartment for rent in Banhan Township, Sayar San Street.
Apartment for rent in Banhan Township, Sayar San Street.
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	12 သိန်း
ငှားရန် - Condo for rent in Pazundaung Township, Yay Kyaw Street,
Condo for rent in Pazundaung Township, Yay Kyaw Street,
ပုဇွန်တောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,000 USD
ငှားရန် - Condo for rent in Dagon Township, Nawady Street, (Grand Nawady Condo)
ဧရိယာ : 2050 sqft
Condo for rent in Dagon Township, Nawady Street, (Grand Nawady Condo)
ဒဂုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	20 သိန်း
ငှားရန် - House for rent in South Okkalapa Township,3Quarter, Ngwe Kyar Yan Avenue
House for rent in South Okkalapa Township,3Quarter, Ngwe Kyar Yan Avenue
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	3,800 USD
Asking Price : 3,800 USD
ငှားရန် - Apartment for rent in Sanchaung Township, U Phee Street,
Apartment for rent in Sanchaung Township, U Phee Street,
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	5.50 သိန်း
Asking Price : 5.50 သိန်း
ငှားရန် - House for rent in Mayangone Township, (8Mile) Shwehinnzi Street,
House for rent in Mayangone Township, (8Mile) Shwehinnzi Street,
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	30 သိန်း
Asking Price : 30 သိန်း
ငှားရန် - House for rent in Mayangone Township, (8Mile) Zay Yar Khay Mar Street,
ဧရိယာ : 2500 sqft
House for rent in Mayangone Township, (8Mile) Zay Yar Khay Mar Street,
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	18 သိန်း
Asking Price : 18 သိန်း
ငှားရန် - Apartment for rent in Sanchaung Township, Yan Gyi Aung Street,
ဧရိယာ : 6255 sqft
Apartment for rent in Sanchaung Township, Yan Gyi Aung Street,
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	5 သိန်း
ငှားရန် - Condo for rent,(New Building)
ဧရိယာ : 2100 sqft
Condo for rent,(New Building)
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,000 USD
ငှားရန် - ရွှေဇဗ္ဗူဒိပ်ကွန်ဒို
Listed on4October 2016
အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	2,500 USD
ငှားရန် - စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဦးဖီးလမ်း တွင် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်
Listed on 19 September 2016
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဦးဖီးလမ်း တွင် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်
ရောင်းရန် - စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ကျောင်းကုန်းလမ်း တွင် ပြင်ဆင်ပြီး အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ကျောင်းကုန်းလမ်း တွင် ပြင်ဆင်ပြီး အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	1,250 သိန်း
ရောင်းရန် - စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဗားကရာလမ်းမပေါ် တွင် ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုအခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်
ဧရိယာ : 2240 sqft
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဗားကရာလမ်းမပေါ် တွင် ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုအခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်
စမ်းချောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	2,600 သိန်း
Asking Price : 2,600 သိန်း